Oslo kommune oo dadweynaha magaalada uga digeyso arintan. - NorSom News
Oslo kommune oo dadweynaha magaalada uga digeyso arintan.
Maamulka degmada Oslo (Oslo kommune) ayaa dadweynaha magaalada degan uga digayo dad sheeganayo inay ka socdaan Kommunaha Oslo oo booqasho aan lasii shaacin ku tagay guryo gaar loo leeyahay, iyaga oo sheeganayo inay baarayaan cudurka Corona.
Oslo kommune ayaa dadweynaha ka codsaday inaan dadkaas loo ogolaan inay soo galaan guryaha gaarka loo leeyahay, maadaama aysan Oslo kommune baaritaan aan lasii shaacin aysan ku tagin guryaha gaarka loo leeyaha, iyada oo aysan jirin sabab keeni karta arintaas.
Halkan kasii akhri fariinta Oslo Kommune.
Previous articleBooliska Giriiga oo toogasho ku dilay tahriibayaal.
Next articleFrp oo qeylodhaan bilaabay: Xuduudka Norway hala xiro.